Happy Birthday Kyaw Soe Linn — MYSTERY ZILLION
Happy Birthday Kyaw Soe Linn
1 member is celebrating their birthday on 01-12-2009:
-Kyaw Soe Linn (born in 1987, Age: 22)
ကိုကျော်စိုးလင်း ရေ ပျော်ရွင်စရာမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ။ ဒီနေ့မွေးနေ့ဆုတောင်းကို စိတ်၀င်စားတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီနေ့က ကျွန်တော်မွေးနေ့လေးဖြစ်နေလို့ အကိုနဲ့ကျွန်တော်က မွေး နေ့ မွေးလ တင်တူတာ မဟုတ်ပဲ ထူးထူးခြားခြား နှစ်ပါတူနေတယ် ။ အကိုလည်း မွေးနေ့မှာပျော်ရွင်ပါစေ။
ကျွန်တော်လည်း 22 ပြည့်တာဗျ။
Happy Birthday ko KIyaw Soe Linn:6::6::65::P:P
ဒီလိုဆိုရင်တော့ မွေးနေ့ရှင်နှစ်ယောက်ကို ထူးထူးခြားခြား ဒီလိုလေးဂုဏ်ပြုမယ်။
1st December က World AIDS Day လေ ......
I also wish u to be luck in all that you do,
not just for today , all the years through.
မွေးနေ ့မှာပျေုာ်ရွင်ပါစေဗျား :6::6::6:
Happy Birthday ပါဗျို့
thank KO saturn
ပြောတာနည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ် ဟီးဟီး :D:D:D:D